DAAWO: Somaliland Oo Jawaab Kulul Ka Bixisay Dhawaaqi Ka Soo Yeedhay Maamulka Butland | Saxil News Network
DAAWO: Somaliland Oo Jawaab Kulul Ka Bixisay Dhawaaqi Ka Soo Yeedhay Maamulka Butland
Hargaysa (Saxilnews) Maamul Goboleedka Somalia ee Puntland ayaa walaac ka muujiyay Hubka dhawaan Dawladda Somaliland ku qabatay Dekedda Berbera.wasiir u hadlay Maamulka Puntland ayaa sheegay inay aad uga warwarsan yihiin talaabada Hubkaasi ay Somaliland kula wareegtay.
Xukuumada Somaliland ayaa Jawaab Adag Ka bixisay Hadalka ka soo yeedhay Maamulka Putland waxaana ay ku sifeyeen hadalka ka soo yeedhay Mid indhaha Caafimaadka qabaa Arki Karo inuu Mad-madaw ku jiro.
Wasiir ku xigeenka Dhinaca Amniga ee wasaarada Arimaha Gudaha somaliland Cali Maxamed Cilmi ayaa sheegay inaanay xidhiidh la lahayn Xarakada Shabaab waxaana uu yidhi.
“Somaliland Hubka iyada ayaa qabatay iyadaana sheegtay,Markaas Qofka wanaagsani wuu Garanayaa Hubka ay dawladi Sheegto inaanu qarsi ku jirin,Lakiin Hubkaasi waa mid
Si Sharci daro ah dalka ku soo galay,Kuna Soo xidhay Dikada Berbera,Gacanta waanu ku haynaa.
Dhinaca kale waxa uu sheegay inaanay jirin wax shabaab ah oo somaliland xidhiidh la leedahay,isaga oo sheegay in Markasta somaliland isku hawsho in ay dalka kala Dagaalanto inaanay soo galin Al Shabaab.
“wasiirkaasi qudhunka dhexdiisa yaala inuu somaliland kula soo gal-gasho waa nasiib daro,afkaas uu ku hadlayna maaha af Masuul ku hadlo,waxaanan leenahay afkii masuulka ku hadal,Somaliland Dalalka jaarkeeda ah waxa ay kula nooshahay jaar wanaag ee jaar wanaaga ilaaliya putland Ayaan leeyahay.
Sidoo kale waxa uu ka hadlay in ay jiraan Haay’addaha Qaramada Midoobay ee baadh hubka in ay yimadeen somaliland waxaana uu sheegay in ay u bandhigayaan Hubkaas waxaana uu yidhi.
“waanu sugaynaa haay’adahaas,waxaanan doonaynaa in ay arkaan hubkaas waanan usoo bandhignay,waxaanan ku rajo waynahay in ay sida ugu dhakhsaha badan dalka u yimadaan,waxaan leeyahay hubkaas Somaliland Ayaa Gacanta ku haysa,Lagamana Yaabo in aanu siu fudud ku siidayno,Madaama Hubkani waa hub Aad u culus.
Hadalka Maamulka Puntland ayaa imanaya iyadoo dhawaan Wasiirka Arrimaha gudaha Somaliland sheegay in Hubkaasi laga dejinayo Hubka Markabkaasina xidhnaan doono.wasiirku ma sheegin cidda Hubkaasi leh iyo halka loo waday.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegay in Markabkan oo Bagaash u siday Berbera uu hubkan u waday Carwo Dubai ah lagana soo qaaday Suudaan